2011-01-23 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
hotfile, rapidshare, megaupload, download.speedbit, 4shared ​နှင့်​အ​ခြား​သော hosting ​ဆိုက်​တွေ​က ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​စောင့်​စ​ရာ​မ​လို​ဘဲ ​ဘယ်​လို Download ​လုပ်​ကြ​မ​လဲ
​အ​ရင်​က​လဲ​ပြော​ပြ​ထား​ပြီး​သား​ပါ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​မ​တူ​ပါ​ဘူး . ​အ​ရင်​ပေး​တဲ့​နည်း​က​တော့ Download ​လုပ်​တဲ့​သူ​များ​လို့​လား ​မ​သိ​ပါ​ဘူး . ​ပိုက်​ဆံ​ပေး​မှ Download ​လုပ်​လို့​ရ​မယ် ​ဖြစ်​သွား​ရော​ဗျာ . ​နည်း​တွေ​က​တော့ ​အ​များ​ကြီး​ပါ . ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ကောင်း​တဲ့​နည်း​လေး​ကို​ပဲ ​ပေး​လိုက်​ပါ့​မယ် . ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​တော့​လဲ​ပြော​ပေါ့
​အဲ့​မှာ ​အ​ဆင့်​သုံး​ဆင့်​ရှိ​ပါ​တယ် . Enter the URL of the file you would like to upload: ​ဆို​တဲ့​အ​ကွက်​မှာ​တော့ ​မိ​မိ Download ​လုပ်​မယ့် ​ဖိုင်​ရဲ့ URL address ​ကို​ထည့်​ရ​ပါ​မယ်။ Enter your email address to receiveanotification when the file is uploaded: ​ဆို​တဲ့​အ​ကွက်​မှာ​တော့ ​မိ​မိ email ​လိပ်​စာ​ပေါ့. ​နောက်​ဆုံး​တစ်​ချက်​က​တော့ I agree to Terms of Service ​ဆို​တဲ့​နေ​ရာ​လေး​ကို ​အ​မှန်​ခြစ်​လေး​ခြစ်​ပေး​ပြီး​တော့ Fetch ​ကို ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ .
​မ​ကြာ​ခင်​မှာ ​မိ​မိ​ထည့်​လိုက်​တဲ့ email ​လိပ်​စာ​ထဲ​ကို Download ​လုပ်​ဖို့ link ​ဝင်​လာ​ပါ့​မယ် . ​ဝင်​လာ​မယ့်​ပုံ​စံ​က
You can click on the following link to retrieve your file: http://www.fileflyer.com/view/gNChjBO
​အဲ့​လို​ဝင်​လာ​မှာ​ပါ . ​အောက်​က http://www.fileflyer.com/view/gNChjBO ​ဆို​တာ ​မိ​မိ Download ​လုပ်​မယ့် Link ​ပါ​ပဲ​ဗျာ . ​အဲ့​ဒီ့ Link ​လေး​ကို​နှိပ်​ပြီး Download ​ကို​သာ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ .
​အား​လုံး​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .
hotfile, rapidshare, megaupload, download.speedbit...